FAALLO:MUXUU YAHAY NIDAAMKA FEDERAALKU? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta FAALLO:MUXUU YAHAY NIDAAMKA FEDERAALKU?
FAALLO:MUXUU YAHAY NIDAAMKA FEDERAALKU?
Federaalku waa nidaam dowladeed kaasoo awoodda dowladda dastuurka dalku u qeybiyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Maamul goboleedyadu waxay leeyihiin meekhaan maamul hoosaad ah, oo waxay haystaan xukun hoosaad ay gobolladooda ku maamulaan.
Awoodaha ay ku shaqeeyaan dowlad goboleedyadu dowladda dhexe ma siiso. Awoodahooda waxay ka helaan dastuurka dalka u yaalla.
Dowladda qaab kaan ah waxay ka duwan tahay nidaamka unitary ga kaasoo awoodaha dowladda oo dhan uu gacanta ugu jiro dowladda dhexe oo kaliya. Ma jiro nidaam dastuuri ah oo awoodaha u qaybiniya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada nidaamka unitary ga mid kaasoo ka duwan midka fadaraalka ah.
Nidaamka fadaraalka ah awoodaha dalka lagu maamulo waxaa loo qaybiyaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waddanka fadaraalka ah.
Labada dhinac midkastaa awoodihiisa wuxuu ka helaa dastuurka dalka u qoran. Mid mid ku xad gudbikaraana majiro sababtoo ah sharciga dalka u dhigan baa xad dastuuri ah u sameeyey, awoodahooduna xudduud bay kala leeyihiin.
Habka dowliga ah ee kor ku qoran waddankii uu ka jiro waa dal fadaraal ah.
Waa nidaam awooduhu u qaybsan yihiin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Fadaraalku waa xeelad siyaasadeed oo lagu doonayo in la iswaa fajiyo midnimada qaranka, awoodaha oo la qaybsado, iyadoo la taageerayo xuquuqa dalka. Waana midnimada, jiritaanka dalka iyo awoodaha gaarka ah dowladda dhexe ee fadaraalka ah. Awoodaha dowladda dhexe ee fadaraalka ah gaarka u ah waa siyaasadda arrimaha dibadda, gaashaandhigga, dhaqaalaha, amniga iyo horumarinta kaabashaaya dhaqaalaha (infrastructure).
Maamul goboleedyada dalka fadaraalka uu ka kooban yahay ma rabaan in ay ka tanaasulaan awoodahooda dastuurku uu siiyey ama siinayo. Haddii ay awoodahooda dowladda dhexe siiyaan, xukun hoosaadkii baa meesha ka baxaya. Markaas waxaa imaanaya nidaamka unitaryga meeshana waxaa ka baxaya nidaamka fadaraalka ah.
Waxaa samayn kara waddammo dhowr ah oo madax bannaan oo ah kuwo caalamku aqoonsan yahay ah, kuwaa soo ka tanaasula awoodahooda qaar ka mid ah si ay u helaan dowlad dhexe oo cusub ee iyaga ka dhaxaysa. Markii ay isku darsamaan waxaa samaysmaya waddan weyn oo xoog badan, iyagana maamul hoosaad iyo mid kasta magac u gaar ah ayaa la siiyaa. Sidaas waxaa u samaysmay dalka Maraykanka 1789.
Fadaraalku wuxuu kaloo ku yimaadaa markii waddan nidaamka unitaryga ah uu u kala burburo tiro maamul goboleedyo ah, kuwaa soo marka dambe iyagu isuyimaada kuna heshiiya nidaamka fadaraalka ah.
Sidaas markii ay dhacdo waxaa dhasha dal fadaraal ah. Sidaasna waxaa ku samaysmay dalka Canada 1867.
Dowlad goboleedyada fadaralku ka kooban yahay waxay raabaan in ay dano badan iyo maslaxooyin badan ka helaan dowlad ay wada leeyihiin oo u dhaxaysa, faa’iidooyin ay ku kifaaxaan bayna dowladdaasi u leedahay iyaga.
Laakiin isla markaasna waxay ku dhagan yihiin kuna adkaysanayaan in ay haystaan magacyadooda iyo maamuladooda u gaarka ah. Fikarka fadaraalku wuxuu ku dhisan yahay in la haysto midow iyadoo midnimadiina khatar ku jirto.
Sidaas daraadeed, awoodaha ayaa loo qaybiyaa dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada. Dowlad kastaa, fadaraalka ama dowlad goboleed, waxaa laga dhigay mid u madax bannaan sharciga inta loo xadeeyey. Mid kasta awood sharci iyo dastuuri bay leedahay, ay u madax bannaan tahay laakiin midda kale shuruucdeeda iyo xudduudeeda sharci ma fara gelin karro. Ma jiri karo fadareeshan ama fadaraal haddii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada awoodaha aan loo qaybin.
Dastuurka fadaraalka ama fadareeshanka waa qoran yahay waana adag yahay. Illaa laga dhigo mid qoran, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaa ka dhex dhici kara muranno ku saabsan xuduudaha sharci ee ay kala leeyihiin. Dastuurku waa inuu waliba ahaadaa mid adag oo aan sahal lagu beddeli Karin. Taas waxaa loola jeedaa waa in aan la ogolaan dastuurkaan in loo beddelo sida sahlan ee sharciyada caadiga ah loo beddelo.Habka loo beddeleyo dastuurka fadaraalka ah waa inuu ahaadaa mid adag.
Baahidaan dastuurka fadaraalka inuu ahaado mid adag waxay ka soo baxday xaqiiqada ah haddii si sahlan dastuurka loo beddelo, waxaa yaraanaya awoodihii maamulada xukun hoosaadka haystey ama waxaaba meesha ka bixi kara dowladihii maamuladu ay la haayeen. Fadaraalkiina halkaas ayuu ku baaba ayaa. Maamul goboleedyadu waligood ma helaan kalsooni ah xukun hoosaadkooda in aan la faragelineyn ama meeshaba laga saareen haddii baarlamaanka fadaraalka dastuurka si sahlan wax uga beddeli karo. Sidaas awgeed, dastuurka waxaa loo arkaa muqaddes, marka waa inaan si fudud faraha loola gelin.
Illaa markii la sameeyey fadareeshanka waxaa jira labo dowladeed, inkastoo dastuurku qeexo awoodahooda iyo xudduudadooda sharci ee ay kala leeyihiin, wali waxaa imaan kara muranno ama iskhilaafyo ka dhexkaca dowladda dhexe iyo dowladaha gobollada ama waxay ka dhex dhikaan labo maamul goboleed. Sidaas darteeed, fadareeshan kastaa waxay leedahay maxkamad sare oo dastuuri ah fasirtana dastuurka fadaraalkaas, xalisana khilaafyada.
Maxkamddaani waxay ilaalisaa dastuurka dalkaas fadaraalka ah. Maxkamaddaasi waxay ka ilaalisaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awoodahooda in aysan siyaadsan. Shaqadaan waxaa qaban kara oo ka mira dhalin kara waxaa weeye garsoor awood badan, madax bannaan, oo dhex dhexaada, kaas oo kali ah baa muranada sharci ee fadaralka xalin kara.
Astaan taan ama muuqaalkaan baa ka duwa fadareeshanka konfadareeshanka.
Konfadareeshanku waa midow jilicsan oo kooban oo waddamadu samaystaan. Laakiin fadareeshinka waa midow rasmi ah oo joogto ah.
Nidaanka uniteriga waa mid keliya kaasoo awooda sare ee xukuumiga ah ama dowladda dastuurka dalku uu siiyo dowladda dhexe oo keliya, taasoo dalka oo dhan xukunta. Si maamulka iyo shaqaduba habsami ugu socdaan waxaa dalka loo qaybiyaa Gobollo, gobolladaas waxaa loo sameeya maamul.Maamulada gobollada waxaa madax looga dhigaa gudoomiyaal gobol, degmooyinka gobollada hoos yimaada waxaa madax u noqda godoomiyaal degmo. Dowladda dhexe maamulada gobollada waxay siisaa awoodo ay wax ku maamulaan. Awoodahaas gobollada la siiyay waa kuwo kooban, kuwaas oo loo kordhin karo, laga yareyn karo, lagana qaadan karo markii la rabo. Sababtoo ah, goballadu xukun hoosaad ma haystaan nidaamkan awoodaha oo dhan dowladda dhexe gacanteeda ayey ku jiraan.
Dowladda dhexe ee fadaraalka ah waxay gudataa waajibaad loo xadadey fulintooda loona igmaday, maamul goboleedyada kala duwan> ee fadaraalka waxay awoodaan in ay keydiyaan dhaqaale badan, iyagoo yareynaya tiro waaxyadooda maamulka ka mid ah.Tusaale ahan dowlada goboleedyada waxaa laga qaaday dhaqaalihii dhanka militariga iyo diblomaasiyadda kaga bixi lahaa.
Dariiqaan fadareeshanka wuxuu u suura galinayaa dalalka yaryar in ay ilahooda dhaqaale si wanaagsan u horumariyaan, markii ay ku midoow baan nidaamka fadaraalka ah.
Nidaamka fadaraalka ah wuxuu isu keenay midnimo qaran iyo xukun hoosaad. Sidaas darteed wuxuu aad ugu haboon ama ugu fiican yahay dalalka waaweyn sida Mareykanka, Indiya iwm. Gobollada kala duwan ee dalalka noocaan oo kale ah, waxay si weyn ugu kala duwan yihiin luuqadda, dhaqanka, diinta, iwm., waxayna leeyihiin baahiyo kala duwan oo dhaqaale iyo siyaasad ah. Nidaaamka fadaraalku dowlad goboleedyada wuxuu siinayaa xukun hoosaad, dowlad weyn oo fadaraal ah oo gobolada ka dhaxaysana way jireysaa.
Nidaamkaani wuxuu iswaafa jiyey dowlad dhexe ee qaran iyo maamul goboleedyo, gobol walbaa arrimihiisa hoose ku maamusho, raalina uu ku yahay.
Awoodaha oo loo qaybiyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, taa soo sal u ah fadareeshanka ma ahaan karro mar walba qaybsi sax ah. Si kastoo, qorshaha hadda ee qaybsiga awooduhu uu u yahay mid sax ah oo dhammaystiran, ma ahaan karo mid saadaaliya baahiyaha, dalabyada, fikradaha iyo isbeddelada mustaqbalka. Wax hadda loo arko in ay muhiim u tahay gobol ama muhiimideedu tahay heer gobol baa barito waxay yeelaneysaa muhiimad heer qaran.
Laakiin dowladda qaranku ma heli karto awood cusub iyadoon dastuurka wax laga beddelin ama garsoorku uusan fasirin. Dastuurka si dhaqsa ah wax loogama beddeli karo sababtoo ah wuu adag yahay, fasiraadda garsoorkuna waa mid gaabis iyo hawl iska daba wareegeysa ah.
Konfadareeshan wuu ka xoog badan yahay isgaashaan buureysi waddamada xorta ah dhexdooda ah, laakiin wuxuu ka hooseeyaa midowka fadaraalka.
Konfadareeshanka heerkiisu wuu ka jilicsan yahay nidaamka fadaraalka. Konfadareeshan wuxuu yimaadaa markii hab lagu heshiiyey lagu sameeyo xukun ka dhaxeeya dalalka samaystay nidaamkaan. Waddamada uu ka kooban yahay konfadareeshanka xorriyaddoodii iyo madax bannaanidoodii ma dhiibaan. Urur kooda kama soo baxo dal cusub. Ururkaan dalalka leh wuxuu u qabtaa shaqooyin kooban oo kala ah iskaashi dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo gaashaandhigga.
Nidaamka fadaraalka ahu faa’iidooyin iyo khasaarooyin intabada waa leeyahay. Dadka wax ka qora fadaraalka qaar ka mid ah baa waxay qabaan faa’iidooyinkiisu in ay ka badan yihiin khasaarooyinkiisa. Laakiin markii la fiiriyo nidaamka fadaraalka ah waxaa soo baxaysa inuu ku habboon yahay dalalka waaweyn ee dadkoodu kala duwan yihiin meelo badan. Sida luuqadaha, diimaha, dhaqammada iyo qoomiyadaha. Wuxuu faa’iidooyin badan u leeyahay dalalka waaweyn ee dhiyac yadaas badan ku kala duwan.
Laakiin faa’iido umalaha waddamada yar yar gaar ahaan dalkii dadkiisu isku luuqad yihiin, isku diin yihiin, isku dhan yihiin isku dadna yihiin.
AXMED CABDDIRAXMAAN SHIIKH NUUR, SENIOR DIPLOMAT,
Previous articleWarbixin: Holaca Hantida iyo Haraadka Abaarta
Next articleMadaxwayne Farmaajo oo Caasho Abuukar Qaasim, u magacaabay la taliyaha arimaha Bulshada